Warshadaha Qandaraaslaha, Shirkadaha - Soosaarayaasha Qandaraaslaha Shiinaha
Tani waa tractorkeena yar ee ugu cuslaa (mini tractor), waxaa laga bedelay cagafyada socodka. Waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin noocyada commen-ka waa dhammaan afarta taayir ee dhaqdhaqaaqi karaan.
Qandaraaslaha wuxuu leeyahay muuqaal tayo sare leh, isticmaalka shidaalka oo hooseeya iyo si fudud u shaqeyneed iwm. Waa howlo badan oo leh lifaaqyo badan oo la gashan karo. Waxaa si balaadhan loogu adeegsan karaa shaqooyin ballaadhan oo dhuuban sida beero, beero, shaqooyinka barkadaha dhulka hoostiisa iyo dhismaha magaalada.
Qiimaha Gawaarida Beeraha Mini Mini Beerta Beerta Qiimaha
1) Wejiyada iyo matoorrada awoodda leh ee isticmaalka shidaalka hooseeya —Kaabo wax soo saarkaaga iyo hufnaantaada.
2) Qaabdhismeedka Ergonomic iyo compact -Ka sii khibrad raaxo leh adiga oo beero, beero, beero iwm.
3) Qalabka beeraha ee lagu beddeli karo - tuuriyaha kalluunka lagu kariyo, trailer, potota harvester, mashiinka biyo mareenka, FM mower iyo wax kale.
Beero yar oo beero yar oo iib ah
Soosaarka Warshadda Qiimaha jaban
12hp 15hp 18hp iyo 20hp mashiinka naaftada
Shiinaha ayaa soo saaray 20hp cagaf lugeyneed / laba tractor wheel ah oo iib ah
12hp socodka traordordiesel / ku soco gadaalka taraafikada / cagaf lugaynta korantada odm
Gabi ahaanba cusub oo loo naqshadeeyay bannaanka, wuxuu ka kooban yahay matoor, dhuxusha, korantada, oo badanaa loo isticmaalo jiidaha iyo gaadiidka.
15hp cagaf cagaf cagaf / cagaf cagaf lugayn / beer cagaf laba-giraan / laba saarayaasha cagaf cagaf / lug koronto gadaal cagaf
Tractor laba lug leh oo 10hp tractor lug ah / lug gadaal cagaf iib ah
waxaan xirfad sare u leenahay taraafikada waxaanan u dhoofinay Poland, Spain, Kenya, Pakistan, Costa Rica… iwm. Tayadayada cagaaran ee tayada leh ee lagu kalsoonaan karo waxaa markasta tixgelin lahaa macaamiisha, sidaa darteed waxaan helnay koox badan oo macaamiisha ah oo aaminaysa cagafteena iyo annagaba.